China POCT Quantitative Immunoassy Analyzer RL-A2000 mpanamboatra sy mpamatsy | Realy
Fehiny: Ity mpandalina ity dia novolavolain'ny teknolojia optoelektronika maoderina. Izy io dia mpandinika marani-tsaina azo ampiasaina ampiasaina amin'ny famakafakana be loatra ny fitsapana haingana. Ny kalitao dia mahatratra hatramin'ny ambaratonga tena tsara raha oharina amin'ny hafa. Izy io dia tsy mifanaraka amin'ny reagentest REALY.
Fampiasana an-tsokosoko: Ity mpandinika ity dia fahitana isa / semi-qualitative / qualitative an'ny hs-CRP, CK-MB, PCT, H-FABP, Myo, D-Dimer, cTnI, NT-proBNP sy zavatra hafa ao amin'ny serum an'ny olombelona, ​​ny plasma, manontolo santionany ra na urin. Ny valin'ny fitsapana dia manampy amin'ny famaritana aretina fanampiny.
Fitsipika fitsapana: Amin'ny alàlan'ny teknolojia detection optoelektronika, ny mpanadihady dia afaka mahazo ny halalin'ny loko amin'ny karatra fitiliana voajanahary, ary manisa ny fifantohana arakaraka ny angon-drakitra fanamafisana.
Sehatra fampiharana: Ampiasaina amin'ny ambaratonga hopitaly rehetra, tobim-pitsaboana, ivon-toerana fanaraha-maso aretina, andrim-panjakana fanamarinana sy quarantine, foibem-panadinana ara-batana ary fianakaviana.
Mila jerena ny raharaha: alao antoka fa madio sy milamina ny latabatra; Apetraka tsara ny santionany, tsy lany daty; Hamarino tsara fa tsy misy kara-panadinana ao amin'ny mpandinika; Hamafiso fa mifanaraka amin'ny karatra test ny kara-panondro; Ireo mpiambina dia manana fiarovana manokana, tsy maintsy mitondra fitaovana fiarovan'ny laboratoara amin'ny fizotran'ny fampiasana.
Manaraka: Fitaovana fanandramana haingana-nCOV IgGIgM 2019 (fanompoana tokana)
Fitsapana haingana LH
Fitsapana haingana IgE
Fitsapana haingana HBsAb
Fitsapana haingana NT-proBNP
Fitsapana haingana CRP
Fitsapana haingana H-FABP